Tranom-piantohana MAMA Nijoro ny masoivoho tany Fenoarivo Atsinanana
Faktioran’ny JIRAMA Efa azo aloha amin’ny paositra money
Manitatra hatrany ny sehatra hahafahan’ny mpanjifany manefa faktiora ny JIRAMA. Ankoatra ny eny amin’ny masoivoho, ny finday ary ny
Fiainana andavanandro Maka tsy taitra ramalagasy
«Aleo matin` ny aretina fa tsy ho faty noana”, “Tsy avela hivoaka izahay nefa ny fanampiana tsy tonga aty aminay”,“Sakànana tsy avela hitady izahay”…
Toliara Nafeniny tao anaty armoara ny olon-tiany
Tovovavy kely iray vao 16 taona monja no tsy hita nandritra ny andro vitsy tany Toliara. Tonga nitaraina teny amin’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona araka izany ny Ray aman-dReniny.
Taorian’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny masoivohon’ny tranom-piantohana MAMA teny amin’ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka dia nahazo trano fiantohana Mama vaovao ihany koa ny any Fenoarivo Atsinanana.
Tanjona ny hanafahana ny fahasahiranan’ireo mpanjifa mahakasika ny fikarakarana ny fiantohana ny fiarakodia. Tamin’ny faran’ny herinandro teo no nanokanana izany ka hampitombo isa indray ireo mpanjifa mikambana ao amin’ny fiantohana MAMA izay efa tafakatra maherin’ny 304.000 amin’izao fotoana izao. Nanatrika ity lanonana ity ireo olo-manankaja maro, toy ny ben’ny tanànan’ny kaominina Fenoarivo Atsinanana, Masinoraly Stewen Miany izay nanambara fa tombony tanteraka ny fiaraha-miasa amin’ny MAMA ary misitraka izany avokoa na ny orinasa na ny mpitatitra na ny mpanjifa. Nambarany fa sady mariky ny fivoarana no porofo amin’ny fandrosoan’ny tanàna ny fisian’ny fotodrafitrasa manara-penitra sy manaraka ny filan’ny mpanjifa tahaka izao. Tonga tany an-toerana ihany koa ny Tale jeneralin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety eto Madagasikara (ATT), ny Jeneraly Jeannot Reribake izay nanamafy fa vonona hatrany ny ATT sy ny minisiteran’ny fitaterana amin’ny fiaraha-miasa amin’ny MAMA.